Morgan Stanley anoderedza mutengo weApple kuUS $ 156 | Ndinobva mac
Morgan Stanley anoderedza mutengo weApple kusvika $ 156
Nemhando iyi yenhau, isu tichafanirwa kubvumirana nevanoongorora avo vakataura panguva iyo Apple yaizotora nguva yakareba kupfuura yaitarisirwa kuti ive 3 trillion kambani yemadhora. Mari yemarudzi akawanda Morgan Stanley yadzikisa mutengo uyo Apple share inofanirwa kusvika anosvika kumadhora zana nemakumi mashanu nematanhatu. Nhamba yekutanga yaive 164.
Haasi ese nhau ari akaipa mune izvi fungidziro dzakaitwa nevezvemari vemarudzi akawanda, Morgan Stanley. Kudzokorora, isu tine zvibodzwa zviviri iyo yawakaongorora:
La share kukosha fungidziro kubva kuApple
Apple services mari yekufungidzira ndima 2021 y 2022
Kune yekutanga, isu tinofanirwa kufunga kuti Morgan Stanley akasimbisa kuti muganho wakanyanya uyo kukosha kwezvikamu uchasvika uri zvishoma pazasi pekutanga manhamba akange afungidzirwa. Neiyi nzira, tinofanirwa kufunga kuti mutengo unenge uri $ 156, apo pakange pachisimbiswa kuti inogona kusvika $ 164. Izvi zvinonyanya kukonzerwa nemhedzisiro inonzi "Kudzvinyirira kwakawanda".
Ndokunge, zvikamu zvemamwe makambani mubhizinesi rebasa hazvina kuchinja kunyangwe paine purofiti yepamusoro. Izvo zvinoguma nekudzikiswa kuwanda. Sekureva kwaHuberty, mashandiro evashambadzi vezera ravo mumwedzi miviri yapfuura, kunyanya vezera repamusoro reApple rine chekuita nemasevhisi, rinobvisa mibairo yepamusoro uye fungidziro yemihoro.
Kune rimwe divi, muongorori mumwechete uyu akasimudza fungidziro yemari kubva kuMasevhisi atove pamusoro pechibvumirano ne3% ye2021 uye ne5% ye2022. Inowedzera kuti iri "kuwedzera kugutsikana" Kufanirwa kweWall Street Services kweayo makore maviri kwakanyanya kuderera. Kukura kwemari yeApple Services 'kuchakurumidza nemapoinzi matanhatu kusvika + 6% muna 22. Kurwisa + 2021% gore-ne-gore uye mapoinzi mana pamberi pekufungidzira kwekubvumirana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Morgan Stanley anoderedza mutengo weApple kusvika $ 156
Disk Drill ikozvino inowirirana neApple's M1